Antananarivo Renivohitra - Kitoatoa ny fanomanana fifidianana filoham-pokontany
Antananarivo Renivohitra – Kitoatoa ny fanomanana fifidianana filoham-pokontany
Na fanomanana aza tsy misy. «Tsy mbola mahalala na inona na inona momba izany izahay hatreto». Io hatrany no fanambaràna nataon’ireo delegen’ny kaominina misahan-draharaha eo anivon’ireo Boriborintany enina eto Antananarivo renivohitra, raha nanontaniana momba ny fa­no­manana ny fifidianana filoham-pokontany.
Araka izany, tsy mbola fantatra mihitsy na hotanterahina amin’ity taona ity na tsia io fifidianana io. Voa­lazan’ ireto delege ireto anefa fa ny Prefektioran’Antanana­ri­vo sy ny minisiteran’ny Atitany ihany no manam-pahefana hanome toroma­rika mikasika ity fifidianana ity. «Ny fanentanana ireo komitim-poko­nolona ihany no tokony ho anjaranay», hoy izy ireo. Ny teo anivon’ny Pref­ektioran’ Antananarivo anefa dia nilaza fotsiny fa «mian­kina amin’izay hevitry ny fitondram-panjakana ihany ny famaritana ny fotoana hana­tan­terahana io fifidianana io». Vao tsy ela ihany koa izay no nanambaran’ireo tompon’ andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ ny Atitany fa «haato mihitsy aloha ny fanatonto­sa­na ity fifidianana ity». «Tsy toko­ny haharitra ela anefa izay fe-potoana izay», hoy izy ireo. Voalaza anefa fa tokony hovitaina amin’ ity taona ity izany fifidianana izany.
Morondava – Lehilahy 16 nofotoran’ ny polisy